माथिल्लो तलाकी डेरावाला दिदीले भनिन्: भाई आफ्नो कोठामा साँ’घुरो भए कहिलेकाहि मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि ! – Ramailo Sandesh
माथिल्लो तलाकी डेरावाला दिदीले भनिन्: भाई आफ्नो कोठामा साँ’घुरो भए कहिलेकाहि मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि !
रावाल दिदी भनिन् ! — कहिलेकाहीँ त्यता साँ’घुरो भए सु’त्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ । कुनै अ’प्ठेरो मान्नुपर्दैन, आफ्नै सम्झे हुन्छ,’ म डेरा सरेको तीन दिनपछि डेरावाल दिदीले भनेकी थिइन् ।दिदीको त्यो भनाइ वास्तवमै सहज थिएन, उनले मलाई किन त्यसो भनिन् ? तीन-चार दिनसम्म मलाई सो’चमग्न बनाएको थियो । म बस्ने माथिल्लो तलामा दिदीको कोठा थियो ।
उनी को हुन्, यो शहरमा के गर्छिन् र उनको परिवारमा को कति छन् भन्ने केही जानकारी थिएन मलाई ।एउटै घरमा बस्ने भएकोले उनीसाग मेरो हाइ-हेल्लोको मात्र स’म्बन्ध थियो । घरको तल-माथि गर्दा देखादेख हुन्थ्यो ।उनी मलाई देख्ने बित्तिकै म’सक्क म’स्केर केही न केही सोधिहाल्थिन् – ‘चिया पिउनुभो ? खाना खानुभो ? नु’हाउनुभो … ?’ यस्तै-यस्तै सवाल रहन्थे उनका ।
शनिवारको दिन कौसीमा घाम ताप्दै घरबेटी दीदीलाई
एकदिन बिहानै मर्निङ वाक गर्न जाँदा सोयम्भूको उकालोमा देखे । एकदम पसीना चुहाउँदै उक्ली राख्नु भएको रहेछ । अनि मैले दीदी हजुरको घर पकनाजोल हैन भनेर सोधेँ । मुसुमुसु हाँसेर हो भन्नुभयो अनि सोध्नु भयो – “कसरी थाहा पाउनुभयो भाई म पकनाजोल को हो भनेर ?” मैले भनेँ – “गएको शनिबार हजुरलाई नुहाइरहेको देखेको थिएँ छतमा ।” उनी एक छिन त बोल्नै सकिन । अनि बोलाउनु पर्दैन त भाई भन्नुभयो ।
अनि मैले पनि तेहि भएर अहिले बोलाएको नी दिदी भने । दुबै जना गफ गर्दै सोयम्भमा पुग्यौ र सँगसँगै पकनाजोलसम्म गफ गर्दै घरसम्म आयौँ । दिदीले सबै कुरा बाटोमानै गर्नुभएको थियो बूढा र छोरो अमेरिका गएको रहेछ । दिदी तीन बर्षदेखि एक्लै बस्नुहुँदो रै’छ । चिया खान जाउ भनेर जिद्दी गरेपछि म पनि दिदीको घरमा नै गएँ । एकदम डेकोरेशन मिलाइएको घर अनि सजावट देखेर म पनि अचम्म परेँ । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई टीभी हेर्दै गर्नु म चिया पकाएर ल्याउछु भनी किचनमा गई । मर्निङ वाकमा गएको ड्रेसमा झन सेक्सी देखिन्थी । मेरो सानो भाई यानिकि लाडो एकदम उठिरहेको थियो ।
रातको समयमा किच्कन्याले यसरि फसाउन सक्छिन् पुरुषलाई ! यस्तो हुन्छ किच्कन्याको ह’र्क’त !
कोरोना संक्रमण ह्वात्तै ब’ढे पछी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो यस्तो बो’ल्ड निर्णय !